मेरो घर घेर्न २५ जना मुङ्ग्रेहरु पठाएछन् तर म धातुले बनेको छु गल्दिन : माधव नेपाल - Kantipath.com
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अझै पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजामहाराजाको शैली देखाइरहेको बताएका छन्। माधव पक्षीय नेता जगन्नाथ खतिवडा नेतृत्वको पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले शुक्रबार ललितपुरमा गरेको प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले यसो भनेका हुन्।
कार्यक्रममा नेपालले ओलीलाई ‘महाराजधिराज’को संज्ञा दिए । उनले भने, ‘हिजो महामहिम श्री ५ महाराजधिराबाट अभिव्यक्ति आयो-माधव नेपालसहित मान्य सदस्यहरुलाई जति पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ, त्यसलाई आम माफी दिइन्छ । एम्नेष्टि इज ग्रान्टेड ।’ कटाक्षपूर्ण भनाइमा नेपालले थपे, ‘कति हामी गदगद भयौं । महाराजधिराजबाट उवाच । हामी गदगद भयौं-वाह, वाह । महाराजधिराज कति खुसी भए छन्, हामीलाई आम माफी दिँदै छन् । नाँच्नुपर्ने भयो । यही हो प्रगति ? यहीलाई कम्युनिष्ट प्रवृत्ति भनिन्छ ?’
उनले कम्युनिष्टहरू विशेष धातुले बनेका भएकाले कसैको धम्कीबाट नडराउने बताए। ‘म विशेष धातुले बनेको छु, कसैसँग डराउँदिन। वादशाहलाई घोडामा झारियो तर सुध्रिएनन्’, उनले ओलीप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘अहंकार कस्तो हुँदोरहेछ भने जति धैर्य गर्दा पनि उही शैली र उही तरिका देखियो।’
उनले ओली सुध्रिएलान् भनेर आफूले संयमता अपनाइरहेको पनि बताए। ‘डोरी जल्यो तर गाँठो उस्ताको उस्तै छ’, भने जस्तै म त मान्छे सुध्रिएलान् भनेर बस्छु, प्रवृत्ति उही छ’, उनले भने, ‘एकता होला भनेर आश गरेँ। हिजो पनि ख्याल गर्दै मिठो मिठो बोलेँ। ख्याल गरेर बोलिरहेको छु। जिब्रो हाडले छेकेको हुँदैन। जिब्रोले बोल्दिहाल्ला भन्यो, एउटा शब्द पनि तलमाथि नहोस् है भनेँ। तर उताबाट उही राजा महाराजाको शैलीमा आदेश आएछ।’
उनले आफूलाई डरत्रास देखाउन ओली पक्षले घर घेर्न मान्छे पठाएको पनि आरोप लगाए। ‘माधव नेपालको घरको छेउमा मार मुङ्ग्रेहरु २५ जना बसेका थिए। यसो हेरेँ उपारखुट्टी लगाएर बसेका’, उनले भने, ‘कस्ता कस्ता कहाँ गए, यिनीहरु आएर माधव नेपाल तर्सिँदैन। म विशेष धातुले बनेको छु। म कुनै हालतमा डराउँदिनँ।’
Previous Previous post: अवकाशको एक महिना पछि सर्वोच्चद्वारा डीआईजी श्रेष्ठको थमौती : अब आईजीपीका दाबेदार !
Next Next post: ओलीको आममाफीमा माधवको टिप्पणी : महाराजधिराज उवाचले हामी गद्‌गद् भयौं !
विपक्षी गठबन्धन भक्तपुरको प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुंदे ज्ञापनपत्र
सचिव फेरबदल : को-को बन्दै छन् नयाँ सचिव ?
महराको थुनछेक बहस आज हुँदै
महेशलाई देउबाको च्यालेन्ज : मलाई सक्दैनौ दुर्लभलाई हराएर देखाऊ
मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दा किन च्यातियो मतपत्र ?